खानेपानीका स्रोतमा ‘कोलिफर्म’- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
खानेपानीका स्रोतमा ‘कोलिफर्म’
दिसाबाट निस्कने ती जीवाणुका कारण मानिसमा पानीबाट सर्ने रोगको महामारी फैलिन सक्ने
पानी उमालेर, क्लोरिनको चक्की वा झोल राखेर वा उमालेर खानुपर्ने
भाद्र १९, २०७५ आश गुरुङ
लमजुङ — सदरमुकाम बेंसीसहरका नगरवासीले उपभोग गर्दै आएको खानेपानी स्रोतमै कोलिफर्म (ई–कोली) जीवाणु भेटिएको छ ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालले गरेको नमुना परीक्षणका क्रममा पानीका मुहानमै कोलिफर्म भेटिएको हो ।
दिसाबाट निस्कने ती जीवाणुका कारण मानिसमा पानीबाट सर्ने रोगको महामारी फैलिन सक्छ । दुई संस्थाले कुवा, धारा, पँधेरा, मुहान, ट्यांकी साथै खोलाका पानीको परीक्षण गरेको थियो ।
नमुनाका लागि परीक्षण गरिएका सबै स्रोतमा कोलिफर्म (ई–कोली) भेटिएको जनस्वास्थ्य अधिकृत केशवप्रसाद चापागाईंले बताए । उनका अनुसार कोलिफर्म समूहको ई–कोली जीवाणु मानिसको आन्द्रामा मात्र पाइन्छ ।
पानीमा ई–कोली (कोलनी फर्मिङ युनिट) भेटिए त्यो दिसाबाट आएको हुन्छ । ‘ई–कोली आफैंले रोग निम्त्याउने होइन । पानीमा दिसा मिसिएपछि अन्य रोगका जीवाणुले मानिसमा महामारी फैलिन सक्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार मानवको घनाबस्ती भएको ठाउँका मुहान तथा धारामा ई–कोलीका जीवाणु बढी मात्रामा देखिएको छ । बेंसीसहरकै चर्चित खानेपानीका धाराहरू गैरीधारा र तीनधारेको पानीमा दिसाबाट निस्कने जीवाणु भेटिएको उनले बताए । ‘मूल नजिकै घरहरू हुँदा सेफ्टि ट्यांकी रसाएर जीवाणु मूलसम्म आइपुग्छन् । यसले गर्दा खानेपानीमै जीवाणु मिसिन्छ र झाडापखला, आउँजस्ता रोगका जीवाणुले मानिसलाई बिरामी पार्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार बेंसीसहरकै अन्य खानेपानीको स्रोत पनि सुरक्षित छैनन् । राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मादण्ड, २०६२ अनुसार शुद्ध अर्थात् मानिसले प्रयोग गर्ने खानेपानीको स्रोतमा ई–कोलीको मात्रा शून्य हुनुपर्छ ।
जनस्वास्थ्यले ६ ठाउँको मुहान, ट्यांकी र धाराको पानी परीक्षण गरेको थियो । ती ठाउँमा ३ देखि ८५ कोलनी फर्मिङ युनिट (ई–कोली) भेटिएको छ । बेंसीसहर ८ बालमन्दिर नजिकैको कुवामा १५ युनिट ई–कोली देखिएको छ ।
क्याम्पस रोडका उपभोक्ताको घरका धाराबाट आएको पानीमा ३ युनिट ई–कोली देखिएको जनस्वास्थ्य कार्यालयका ल्याब टेक्निसियन अधिकृत निरोजकुमार श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार बेंसीसहर ११ रामचोकबेंसी, दोर्दी गाउँपालिका ४ नौथर शेरा, मध्यनेपाल १, जिताकोट र जिताबेंसी, राइनास नगरपालिका २ बोराङखोला र दूधपोखरी गाउँपालिका २ बिचौर ठाँटीका खानेपानीका मुहान, ट्यांकी, धारा, कुवालगायतको पानी परीक्षण गरिएको थियो । सबै पानीका स्रोतमा ई–कोली भेटिएको उनले बताए ।
लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालले बेंसीसहर नगरपालिकाको चिती तिलाहर, दूधपोखरी गाउँपालिकाको कोल्की, राइनास नगरपालिकाको तार्कुघाट, दोर्दी गाउँपालिकाको भारते, सुन्दरबजार नगरपालिकाको परेवाडाँडा, मध्यनेपाल नगरपालिकाको रम्घा, क्व्होलासोंथर गाउँपालिकाको मालिङ र मस्र्याङदी गाउँपालिकाको सिम्पानीका पानीका मुहान, ट्यांकी र धाराका खानेपानीमा ई–कोली परीक्षण गरेको थियो । अस्पतालका मेडिकल रेकर्डर गणेश गुरुङका अनुसार ती ठाउँमा २ देखि १ सय बढी युनिट बढी ई–कोली भेटिएको छ ।
परेवाडाँडामा १ सय र चिती–तिलाहारका खानेपानीमा १ सयभन्दा बढी ई–कोली भेटिएको उनले बताए । लमजुङमा ४ वर्षअघि एकीकृत पोषण कार्यक्रम (सुआहारा) जिल्लाका साबिक ६१ वटा गाविसमा गरेको नमुना परीक्षणका क्रममा कोलिमर्फ (ई–कोली) देखिएको थियो ।
त्यतिबेला विभिन्न स्रोतबाट आएको ४ सय १९ खानेपानी नमूना परीक्षण गरिएकोमा २ सय ४४ मा कोलिफर्म भेटिएको थियो । त्यसपछि बर्सेनि आर्थिक वर्षको अन्तिम अर्थात् बर्खायाम सुरु हुनै लाग्दा यसको परीक्षण गरिँदै आएको छ ।
लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालका मेडिकल अधिकृत डा. हिक्मत भण्डारीले स्वास्थ्यका लागि कोलिफर्म (ई–कोली) हानिकारक नभई उक्त पानीमा दिसा मिसिएको प्रमाणित भएकाले दिसाबाट पानी मिसिने अन्य जीवाणुले महामारी निम्तिने खतरा हुने बताए ।
दिसा मिसिएको खानेपानी प्रयोग गर्दा झाडापखला, आउँ, हैजा, टाइफाइडजस्ता रोग लाग्न सक्छ । ‘खानीपानीका स्रोत नजिकै शौचालय भएकाले पानीमा ई–कोलीका जीवाणु मिसिन सक्छन्,’ उनले भने, ‘पानी खाँदा उमालेर, क्लोरिनको चक्की वा झोल राखेर वा उमालेर खाँदा राम्रो हुन्छ ।’ यस्तै पानीलाई फिल्टर, सोडिस गरेर पनि खानेपानी पिउन सकिन्छ । कोलिफर्म (ई–कोली) देखिएको ठाउँमा मुहानको सरसफाइ गर्नुपर्ने उनले बताए ।
प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ १०:१५
म्याद थप्दा थप्दै ७ वर्ष !
२ वर्षमा सक्नुपर्ने पुल ठेकेदारको लापरबाहीले ७ वर्ष बितिसक्दा पनि अधुरै रह्यो
भाद्र १८, २०७५ आश गुरुङ
दोर्दी (लमजुङ) — दोर्दीखोलामा निर्माणाधीन मोटरेबल पुल ७ वर्ष पुग्दा पनि अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । २ वर्षमा निर्माण सक्ने गरी बेंसीसहर ११, चितीको चित्रे र दोर्दी गाउँपालिका–४, नौथरको शेरा जोड्न निर्माणाधीन पुल अलपत्र पर्दा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
लमजुङको बेंसीसहर नगरपालिका ११ चितीको चित्रे र दोर्दी गाउँपालिका सिमाना दोर्दीखोलामा निर्माणाधीन पुल । तस्बिर : आश गुरुङ
डिभिजन सडक कार्यालय दमौलीका अनुसार २०६८ चैतमा शिलान्यास गरिएको पुल २०७० असार मसान्तसम्म निर्माण पूरा गर्ने गरी हेटौडाको सपना निर्माण सेवा र धादिङको जयबाबा निर्माण सेवाले ठेक्का सम्झौता गरेका थिए । सम्झौतापछि लामो समयसम्म काम नगरेको, गरेजस्तो गरी ठेकेदार भाग्ने गरेको र ठेकेदार सम्पर्कमा नआएको स्थानीयको भनाइ छ । गत असारबाट काम पुन: सुरु भए पनि भदौ पहिलो साताबाट निर्माणस्थलमा कामदार छैनन् ।
ठेकेदारले ज्याला नदिएको भन्दै उनीहरू काम छाडेर भागेको दोर्दी गाउँपालिका अध्यक्ष ओमबहादुर गुरुङले बताए । भन्छन्, ‘चित्रे र नौथरको शेरा जोड्न निर्माण हुनुपर्ने पुल पूरा नहुँदा सिंगो गाउँपालिकाका बासिन्दालाई समस्या परेको छ ।’ कामदारले पैसा नपाएको भन्दै गाउँपालिकामा गुनासो गर्न आएको र भदौ पहिलो साताबाट काम काम छाडेर गएको उनले बताए । ‘सीडीओ, एलडीओ, नेता, सांसद, मन्त्री सबैलाई भनियो,’ उनले भने, ‘ठेकेदारकै पावर ठूलो हुने रहेछ कि क्या हो । ७ बर्षअघि सुरु गरेको पुल अझै पूरा भएको छैन ।’
७५ मिटर लम्बाइ र ६ दशमलव २५ मिटर चौडाइको पुल भ्याटसहित करिब ४ करोड रुपैयाँमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । छेउमा २ फाउन्डेसनसहितको पिलर र बीचमा २ पिलर गाडेर ३ वटा स्ल्याब बनाउनुपर्ने थियो । अहिले २ स्ल्याब बनिसकेको छ भने एउटा निर्माण अलपत्र परि बसेको छ । ‘हामीले ०६३/६४ देखि पुलको माग गरेका थियौं । ०६८ को अन्तिममा सुरु भयो । तर, अहिलेसम्म बनेन,’ दोर्दी गाउँपालिका उपाध्यक्ष दिलबहादुर घलेले भने, ‘पहिले ठेकेदार सम्पर्कमा आउन चाहेन । को–हो भनेरै चिनिएन । अहिले आएर काम गरेको थियो । फेरि रोकियो ।’
७ वर्षसम्म पनि पुल बनाउने ठेकेदारलाई सरकारले कारबाही गर्न नसकेको उनले आरोप लगाए । पुल नबन्दा दोर्दी खोलामा निर्माणाधीन ४ जलविद्युत् आयोजनाको काम पनि प्रभावित भएको छ । सामान ढुवानीलगायत सामग्री निर्माणस्थलसम्म पुर्‍याउन नसकिएको आयोजनाका इन्जिनियर दीपक ज्ञवालीले बताए । ‘हिउँदमा हयुम पाइप राखेर सवारी वारपारि गरियो । बर्खा लागेपछि सबै डुब्यो । ढुवानी रोकियो, आयोजना निर्माणमै समस्या आयो,’ उनले भने ।
डिभिजन सडक कार्यालय दमौलीका डिभिजन इन्जिनियर भानु जोशीले २ कम्पनीको ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) मा निर्माण भए पनि यसको जिम्मा जयबाबा निर्माण सेवाका प्रमुख श्याम श्रेष्ठले लिएका थिए । काम गर्छु र सक्छु भनेपछि म्याद थप्दै गरेको र कार्यालयले पछिल्लो समय म्याद थपेको थिएन । ‘ठेकेदारलाई खोज्दैमा हैरान थियौं । बल्ल–बल्ल भेटेर श्यामजीले ६ महिनामा सक्छु भनी गत वर्षको साउनमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, काम भएन । अहिले सपना निर्माण सेवाका प्रमुख हरिजी (हरिप्रसाद ढकाल) को जिम्मामा छ ।’
साउन र भदौ महिना वर्षा हुने भएकाले काम रोकिएको र असोजबाट सुरु हुने जोशीले बताए । उनका अनुसार सम्झौताको आधा रकम निर्माण कम्पनीलाई दिइसकिएको छ । अब पुरै काम सकेर मात्रै दिने उनले बताए ।
सपना निर्माणका निर्देशक ढकालले भदौभित्रै पुलको निर्माण सकिने दाबी गरे । डिभिजन इन्जिनियरले बर्खामा काम नहुने र असोजबाट काम सुरु हुने बताए पनि निर्माण कम्पनीका निर्देशक ढकालले भने केही दिनमै काम सुरु हुने र भदौमै सक्ने बताएका छन् । अहिले काम रोकिएको निर्माण कम्पनीका ढकालले पनि स्वीकारेका छन् ।
‘अब १/२ दिनमै काम सुरु हुन्छ । भदौभित्र काम सक्छौं । दसैंअगावै मोटर गुडाउँछौं,’ उनले भने । यसअघि जयबाबालाई निर्माणको जिम्मा लगाएकामा काम नभएपछि आफैंले निर्माणको जिम्मा लिएको उनले बताए । ‘मैले जिम्मा लिएको ३ महिना जति भयो । ३ महिनामा काम अघि बढेको छ,’ उनले भने । उनले पुल निर्माणको ७० प्रतिशत सकिएको र ३० प्रतिशत मात्र काम बाँकी रहेको बताए ।
यो पुल निर्माणाधीन अवस्थामा डिभिजन सडक कार्यालय दमौलीमा ३ जना प्रमुख फेरिए । स्थानीयले ठेकेदार कम्पनी र सडक कार्यालयका प्रमुखको मिलेमतोमा काम रोकिएको बताएका छन् । काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको माग लिएर प्रशासन र डिभिजन सडकमा स्थानीय बासिन्दा पटक–पटक डेलिगेसन गए पनि सुनुवाइ भएको थिएन । इन्जिनियर जोशीका अनुसार सपना–जयबाबा जेभीका नामबाट काम सुरु गरिए पनि यसको नेतृत्व जयबाबा निर्माण सेवाले लिँदै आएको थियो ।
गत वर्ष साउनमा पुल निर्माणको ठेक्का तोडेर कम्पनीलाई कालोसूचिमा राख्ने चेतावनी दिएपछि जयबाबाका प्रमुख श्याम श्रेष्ठले ६ महिनामा काम सक्ने बाचा गरेको उनले बताएका थिए । तर, समयमा काम नगरेका ठेकेदार उम्किएको र अहिले सपनालाई जिम्मा लगाएको स्थानीयले बताएका छन् । अहिले ज्वाइन्ट भेन्चरमा रहेको सपनाले निर्माणको जिम्मा लिएपछि जयबाबालाई केही गर्न नपर्ने जोशीले बताएका छन् ।
‘काम गर्ने जिम्मा दुवैको हो । एउटाले गर्छु भनेपछि अर्को कम्पनीलाई केही गर्न मिल्दैन,’ उनले भने । डिभिजन सडक कार्यालयले छुट्टै कुरा गर्ने र ठेकेदारले अर्कै कुरा गर्ने गरेपछि स्थानीय बासिन्दा पुल तत्काल बन्नेमा ढुक्क हुन सकेका छैनन् ।
प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ १९:३१